ပြည့်ဖြိုး (နည်းပညာမျှဝေခြင်း): August 2012
Deep Freeze Standard v7.30.020.3852 + Serial
အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာအသုံးများတဲ့ Deep Freeze ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။အသစ်ထွက်
လာတဲ့ Version လေးကိုဘဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ဆိုရင် အသစ်ထွက်တိုင်းတင်ပေးတာ သုံးခါရှိသွား
ပါပြီ။ အသုံးဝင်ပုံလေးကို လည်းရှင်းပြထားပြီးသားဖြစ်လို့ထပ်ပြီးပြောမနေတော့ပါဘူးအောက်က Link
မှာသာဒေါင်းယူသွားပါဗျာ။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင်လည်း Serial Key လေးပါ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 11:31 PM No comments:
Microsoft Security Essential 4.0 - 64bit & 32bit
ကျွန်တော့်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး Antivirus ကိုပြောပါဆိုရင်တော့ MSE ဆိုတဲ့ Microsoft
Security Essential လို့ဘဲပြောမှာပါ။ ဘယ်သူမှမမေးလည်း လျှာရှည်ပြီး ပြောတာပါဗျာ။ အရင်တစ်ခေါက်
တုန်းကတော့ တစ်ခါတင်ပေးဖူးပါတယ်။ဒါပေမယ့် 64bit မပါပါဘူးဗျာ။ အခု တင်ပေးလိုက်တာကတော့ 32bit ရော 64bit နှစ်မျိုးလုံးကိုပေါင်းပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အရမ်းကိုသုံးရတာပေါ့ပါးပြီးအဆင်ပြေ
လွယ်ကူတဲ့ Antivirus တစ်မျိုးပါ။ အခြားသော Antivirus တွေလိုမျိုး လိုင်စင်အတွက် စိတ်မညစ်ရပါဘူ။
Microsoft ကထုတ်တဲ့အတွက် Microsoft Window တွေအတွက် Free သုံးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Offline Update
လိုချင်သူများလည်း ကျွန်တော့ဆိုဒ်မှာ အချိန်မရွေး ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 8:34 PM No comments:
Window XP ,7, Vista ကနေပြီး လွယ်ကူစွာဘဲ Window 8 စတိုင်ပြောင်းသုံးကြည့်မယ်
Window 8 ပေါ်လာတာတော့ကြာပါပြီဗျာ။ အခုတင်ပေးချင်တာလေးကတော့ Window 8
စမ်းသုံးချင်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Window လည်းပျောက်မသွားဘဲ Window 8
စတိုင်လေးကို လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Software တစ်ခု Install လုပ်သလိုလေးဘဲ လုပ်ရ
မှာဖြစ်ပါတယ်။ မသုံးချင်တော့ဘူးဆိုရင်လည်း Uninstall လုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ မိမိ အရင်က အသုံးပြုနေ
တဲ့ Window အတိုင်းဘဲပြန်သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Key , Crack , Patch တွေမလိုပါဘူး Full Version
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 10:56 PM2comments:
Media Player Codec Pack.v4.2.2
တော်တော်အသုံးဝင်မယ့် Player လေးပါ။ ဒီကောင်လေး Support မလုပ်တဲ့ Movie
File ဆိုတာမရှိသလောက်ပါဘဲ။ အရင်ကလည်းတင်ပေးဖူးပါတယ်။ အခု Version အသစ်လေးထွက်လာ
လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Player လေးတစ်ခုဆိုတော့ ထွေထွေထူးထူး ရှင်းပြစရာ မလိုပါဘူးနော်။
အောက်က Link မှာသာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါဗျာ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 11:29 PM2comments:
ESET Key Tool V8
ဒါလေးက ESET Smart Security နဲ့ ESET NOD32 Antivirus အတွက် Key ရှာပေးတဲ့
Tool လေးပါဗျာ။ ESET Antivirus အသုံးပြုသူတွေအတွက်တော့ Key အတွက်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။
ဒါလေးကို Run ပေးလိုက်တာနဲ့ Auto Update ထွက်တဲ့ Key တွေကို ရှာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Version
နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ကို 32bit & 64bit နှစ်ခုလုံးပါဝင်ပါတယ်ဗျာ။ အဲဒီအပြင် ESET Mobile Security
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 9:52 PM No comments:
Labels: Antivirus, Key / Crack / Patch
Windows ရဲ့ Admin Password ကို CD တစ်ချပ်နဲ့ လွယ်ကူစွာဖောက်နိုင်နဲ့ Software
လေးပါ။ အရှေ့မှာလည်း နှစ်မျိုးလောက်တင်ပေးဖူးပါတယ်။ ဒါလေးကလည်း နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့
Version လေးကိုတင်ပေးလိုက်တာပါ။ Window XP ,7, Vista , 2008 , 2003 , 2000 အားလုံးမှာ အ
လုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တာက ISO ဖိုင်လေးပါ အဲဒါလေးကို Nero နဲ့ Burn လိုက်ပါ။
ပြီးသွားရင် Computer ကို Restart ချလိုက်ပါ။ First Boot ကို CD Rom ပြောင်းပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်
# 100% recovery rate
# All passwords are reset instantly
# Windows7New!, Vista, Vista SP1 supported
# All Windows Workstations supported
# Resets secure boot options: startup password or startup key disk
# Displays account properties
# Resets local Administrator passwords
# Resets Domain Administrator passwords
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 10:25 PM 1 comment:
Labels: Hacking, Security, Window
Uniblue RegistryBooster 2013 v6.1.0.9 + Activator
Registry Error တွေကို အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပေးတဲ့ Software လေးပါ။ ဒါမျိုးတွေတင်တာများ
လွန်းလို့ ဘယ်လိုစကားလုံးသုံးပြီးရှင်းပြရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူးဗျာ။ အားလုံးက အတူတူပါဘဲ။ ဒါလေး
ကလည်းနောက်ဆုံးထွက် Version လေးဖြစ်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။
• Advanced and effective registry optimization
• An elegant and easy to use interface
• A sophisticated registry defragmentation engine
• Deep registry scan complete with registry damage diagnosis
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 8:42 PM No comments:
Labels: Maintenance, Registry
Mobile Guide Journal Vol-1 , Issue-67 (27.8.12)
နည်းပညာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဂျာနယ်တွေကိုလည်း ကျွန်တော်ဆိုဒ်မှာ အပတ်စဉ်တင်သွားပေးပါ့
မယ်ဗျာ။နောက်အပတ်များမှာလည်း အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့တိုင်း တင်ပေးသွားပါ့မယ်ဗျာ။ အခုအပတ်မှာ
Mobile Guide Journal Vol-1 , Issue-67 ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အောက်က Link မှာဒေါင်းယူပြီး
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 1:36 AM No comments:
Labels: Mobile Guide Journal
အင်တာနက်ဂျာနယ် အတွဲ(၁၃)၊ အမှတ်(၃၃) (27.8.12)
အပတ်စဉ်တင်ပေးနေတဲ့ အင်တာနက်ဂျာနယ် အတွဲ(၁၃)၊ အမှတ်(၃၃) (၂၇.၈.၂၀၁၂)
ကို ဒီနေ့ထွက်ထွက်ချင်း မူရင် ဒေါင်းလုပ်လင့်ကိုယူပြီးပြန်လည်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ နောက်အပတ်
တွေမှာလည်း အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့တိုင်းဆက်လက်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ မိမိဖတ်ချင်တဲ့အ
ကြောင်းအရာတွေကို ရွေးချယ်ပြီး ဒေါင်းယူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ PDF Logo လေးတွေကို နှိပ်ပြီးဒေါင်းယူ
Issue Date IJ Main Mobile Education Electronic Tech Inside
အတွဲ(၁၃)၊ အမှတ်(၃၃) ၂၇.၈.၂၀၁၂
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 10:57 PM No comments:
Labels: Internet Journal
အမြန်ဆုံး လက်ဆင့်ကမ်းပြီး ကြေငြာပေးကြပါဗျာ။
ကျွန်တော့်ဆိုဒ်က နည်းပညာအတွက်သီးသန့် ပြုလုပ်ထားတဲ့ဆိုဒ်လေးပါ။ ဒါပေမယ့်
ဒီနေ့မနက် ဒီသတင်းလေးကို အကိုတစ်ယောက်က Forward လုပ်ပေးပါဆိုလို့ ကျွန်တော်ဒီ Post လေး
တင်ဖြစ်သွားတာပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ Blog မိတ်ဆွေများ နဲ့ Facebook မှ မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်း ဒီ
ကြော်ငြာလေးကို လက်ဆင့်ကမ်းပြီး ကူညီပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 8:35 PM No comments:
Kaspersky All Version (Only Key)
Kaspersky ချစ်သူများအတွက် လိုင်စင်ကီးလေးတွေကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Kav 6.0
မှ နောက်ဆုံးထွက် သော Kav 2013 အထိ Key များကိုထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေ
ကြမယ်လိုထင်ပါတယ်။ Kaspersky ထည့်နည်းကို မသိရှိသူများကတော့ ဒီမှာ ၀င်ကြည့်ကြပါနော်။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မရေးပြတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆရာ (ဘော်ဒါ) Pyae Phyo (ပြည်) ရှင်းပြထားတဲ့ Link လေးကိုပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 12:46 AM 1 comment:
Labels: Key / Crack / Patch
GridinSoft Trojan Killer v2.1.2.8
ကွန်ပြူတာကိုပြသာနာရှာတဲ့ Virus တွေထဲမှာ Trojan ကလည်းဆိုဆိုးဝါးဝါး တစ်မျိုးဒုက္ခပေးတက်
တဲ့ Virus တစ်မျိုးပါဘဲ။ တချို့သူငယ်ချင်းတွေကကွန်ပြူတာမှာ Antivirus တစ်မျိုးထည်းရှိရင်လုံးလောက်ပြီ
လို့ထင်တက်ကြပါတယ်။ အမှန်တကယ်မှာတော့ ဒီလိုမျိုး Trojan Virus ကိုဘဲ သီးသန့်သတ်ပေးနိုင်တဲ့
Antivirus လေးတစ်မျိုးထပ်ပြီးရှိထားမယ်ဆိုရင် ပိုပြီးကောင်းမှာပါ။ ဘယ်လို Antivirus မျိုးနဲ့ မဆို အတူတူ
ထားပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့လည်း သုံးရအဆင်ပြေစေပါတယ်။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 9:22 PM No comments:
Auslogics BoostSpeed v5.4.0.5 + CrackSerial
ကွန်ပြူတာရဲ့ Speed ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ Tools လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ဒါလေးကတော့ ကျွန်တော့်ဆိုဒ်မှာ အမျိုးအစားစုံစုံလင်လင်နဲ့ Version အမျိုးမျိုးတင်ပေးထားပြီးသားပါ။
ကွန်ပြူတာရဲ့ Speed အပြင် Internet Connection ကိုပါမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ကွန်ပြူတာအတွင်း
မှာရှိတဲ့ Registry ပိုင်းတွေ System ပိုင်းတွေ Window ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Error တွေကိုလည်း ဖြေရှင်းပေး
နိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အခြားသောလုပ်ဆောင်ချက်ပေါင်းများစွာကိုလည်း စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ Software ပါ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 12:07 AM No comments:
Labels: Maintenance, Registry, Software
VACANCY ANNOUNCEMENT JOB PROFILE
"Asachild-focused organization, Save the Children in Myanmar
seeks to protect to all children we are in contact with”
(Community-based Disaster Risks Reduction Project)
Place of work: Mawlamyaingyun & Laputta in Ayeyarwaddy Region
Contract Duration: Until end of June 2013
Reporting to: Four direct reports of Project Assistants
Budget Responsibility: No, but responsible for planning and monitoring
Child Protection Level:3(The responsibilities of the post require you to work directly, or have frequent contact, with children or young people, individually or in groups)
To deliver field-level learning activities for increased resilience and improved preparedness of vulnerable communities in Delta areas to recurrent natural hazards and to ensure overall project planning, implementation, and management of monitoring and evaluation, impact assessment and information management forahigh quality, innovative and effective learning programmes.
Conduct participatory vulnerability analysis in the target communities to address the identified knowledge and skill gaps and to build understanding of disaster preparedness and disaster risk reduction
Assist in developingamanual and training program for capacity building of local communities and other stake holders
Support communities in establishing Village Disaster Management Committees(VDMCs) and Children’s Disaster Management Committees (CDMCs)
Facilitate training workshops on Emergency Preparedness Plan (EPP) and Disaster Risks Reduction (DRR)
Respect to and work with children inside or outside the project locations
Support VDMC and CDMCs in developing DRR and EPP IECs materials
Assist in procurement of materials, supplies and maintenance of project equipment and repair
Assist in community mobilization movements and activities inside or outside project area
Ensure high quality field-level learning activities delivered in timely, efficient and effective manner
Coordinate with other external departments (education - formal and non-formal) and support VDMC and CDMCs for developing EPPs
Review and improve the design and implementation of standard training packages to constantly ensure quality and uniform approach to capacity building
Support communities in effective implementation of small grant for mitigation measures
· Establish and maintain interagency relationships with local, international NGOs and UN agencies to ensure collaboration and coordination
· Develop outputs and outcomes, and establish training targets which link to project activities
· Developaperformance monitoring framework to measure progress, effectiveness and achievement of expected results, specifying qualitative and quantitative indicators, data sources, and collection methods
Work with project staff to ensure accountability systems are in place that engage beneficiaries and stakeholders in evaluations, impact assessments and research
Monitor and document the progress of programme activities against agreed indicators and the impact of programmes to inform overall programme strategy
Collect accurate and timely data of programme activities and utilize project management cycle to reflect and analyze results and feedback, develop best practices, and implement lessons learned back into the project
Prepare reports as required on the programming activities for internal, donor and beneficiary community reporting
Facilitation and training experience: experience using participatory training and facilitation methods essential
Experience working within NGO, humanitarian, disaster contexts essential
Creativity and innovation skills to deliver and promote new approaches to responding to learning needs and objectives
Experience and knowledge of monitoring, evaluation and needs/impact assessment methods
Skills in designing and implementing information management and performance measurement framework
A commitment to children’s rights, children’s participation and non-discrimination.
Strong computer proficiency, particularly with Microsoft Excel and Word, and ability to use computer programs to collect, document and share assessment and monitoring results
Strong persuasion, negotiating and influencing skills, and the ability to work collaboratively
Proven analytical and problem solving skills and ability to work under pressure
Excellent communication skills in order to deal tactfully and sensitively withawide range of people from different organizations
Excellent verbal and written skills in Burmese language and good written and spoken English
Interested and qualified candidates are requested to send an Application Letter and Curriculum Vitae to:
226 U Wisara Road| Bahan Township| Yangon| Myanmar
Email address: Khaingkhaing.htay@savethechildren.org| recruitment.ygnhr@gmail.com |
not later than5P.M., 31 August 2012 (Friday).
Note: Candidates are also requested to mention in the applications if there is, blood/marriage relationships with the existing Save the Children employees.
No requirement of photo or copy of certificates and only short-listed candidates will be contacted.
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 9:31 PM No comments:
seeks to protect all children we are in contact with".
Place of work: Mawlamyaingyun and Laputta in Ayeyarwaddy Region
Reports to: Project Officer and Area Manager
To facilitate the effective and successful planning, implementation, monitoring and evaluation of programme activities in the Township and villages/wards assigned - in collaboration with the Project Officers and Area Manager.
To assist with administrative functions and manage overall communications, clerical and logistical requirements for inter-agency learning and accountability activities.
· Conduct baseline survey and data entry, and assist in design of project activities in line with agreed work plan.
· Ensure community mobilisation, and facilitate community-based project activities through regular interaction with children and community members, including providing training, guidance and support.
· Take steps to ensure that the programme benefits the poorest and most disadvantaged children.
· Supervise and train Village Disaster Management Committees(VDMCs) and Children’s Disaster Management Committees (CDMCs)
· Respect to and work with children inside or outside the project locations
· Liaise with Township and village authorities, and departmental officials regarding the project activities as necessary
· Support VDMC and CDMCs in developing DRR and EPP IECs materials
· Assist and facilitate capacity building workshops for variety of stakeholders.
· Assist in procurement of materials, supplies and maintenance of project equipment and repair.
· Assist supervisor in preparing township work plan and budget estimation.
· Responsibility for cash disbursement for assigned project activities.
· Keep records of activities, and report regularly and as requested on programme progress.
· Any other duties and tasks assigned by supervisor.
· High school or equivalent education, University Degree is preferable
· Experience working within NGO, humanitarian, disaster contexts preferable
· Proven team working ability
· A commitment to children’s rights, children’s participation and non-discrimination.
· Computer proficiency (or at least willingness to learn)
· Ability to live and travel in remote locations
· Interest & willingness to learn from community
· Commitment to and understanding of Save the Children’s aims, values and principles.
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 9:14 PM No comments:
Window XP ,7, Vista ကနေပြီး လွယ်ကူစွာဘဲ Window 8...
Folder Lock v7.1.1 with Keygen
WebcamMax 7.6.4.2 Full Version With Patch
Android ဖုန်းမှာ သတင်းများကို အခမဲ့ ဖတ်နိုင်တဲ့ Ap...
Stellar Phoenix Windows Data.Recovery Pro.5.0.0.0
ဓါတ်ပုံကို ပန်းချီဆွဲသမျိုးလေးလုပ်နိုင်သည့် Pencil...
Mobile Guide Journal Vol-1 , Issue-66
ယခုရာသီရဲ့ ဘောလုံးပွဲစဉ်ဇယားတွေကို Blog မှာထားချင်...
အင်တာနက်ဂျာနယ် အတွဲ(၁၃)၊ အမှတ်(၃၂) (၂၀.၈.၂၀၁၂)
Norton Antivirus 2012 Only Serial Key
Driver Magician v3.70 Final + Serial (4.MB)
Smart Projects IsoBuster Pro v3.0
Revo Uninstaller Prov2.5.8 With Patch
Android အကြောင်း ပါးပါးလေး ပြောမယ်
Puzzle Hero Game (Portable)
အင်တာနက်ဂျာနယ် အတွဲ(၁၃)၊ အမှတ်(၃၁)
AVG PC Tuneup 2012 v10.0.0.27 + Serial
Avast Internet Security 7.0.1456 License File (Val...
Angry Birds Rio v1.2.2 & Angry Birds Seasons v1.6....
Blog မှာ Forum တွေလိုမျိုး Chat Room လေးထားကြည့်မယ...
NufSoft.Nature.Illusion.Screensaver.v4.51 wity Key...
USB Disk Security v.6.2.0.18 With Keygen
Protectorion.Data.Safe.Pro.Edition.v3.4 With Key
Bridge Architect Beta 1.1.3 For Android Game
Internet Website Directory & Using Facebook
Internet Download Manager 6.12 Build Beta 8 With ...
SM3 ရန်ကုန် ၊ မန္တလေးလမ်းညွန် For Android
Driver Genius Professional 11.0.0.1128 + Crack
Adobe Acrobat X Professional 10 with Crack
Wallpaper Fro PC Desktop
Movavi Video Converter v10.2.1
Hear Audio Edit Software v.1.0 With Serial
Acronis True Image Home 2012 FULL VERSON
Learning Guide For Excel-2007 (Ebook)
History အားလုံးကိုရှင်းပေးနိုင်တဲ့ History Sweeper...
Belltech Business Card Designer Pro v5.4.0 (Portab...
Autorun Virus Remover v.3.1
Aidfile Recovery Software.3.5.4.3 with Keygen